को हुन् राम ? | Hamro Patro
रामसीता कहानीको यति सराहना किन हुने गर्दछ त ? के राम साँच्चै भगवान् नै हुन् त ?
राम र सीताको प्रभाव नेपाल र भारतका हिन्दू समुदायमा युगौँदेखि रहँदै आएको छ । आजसम्म पनि हरेक वर्ष जनकपुरमा सीतालाई लिन अयोध्याबाट जन्ती आउने गर्दछ । ८० प्रतिशत जनसंख्या हिन्दू रहेका धेरै भारतीयहरु जीवनमा एक पटक जनकपुर–अयोध्या तीर्थाटन गर्ने इच्छा राख्दछन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अयोध्या र जनकपुरलाई जोडेर रामायन वा सीतायान सर्किटमार्पmत् तिर्थाटन प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धता समेत दिइसकेका छन् ।
तर, दश वर्षअघि भारतकै सेथुसमुन्द्रम परियोजना बन्न खोज्दा रामसीताको अस्तित्व पुराणमा मात्र सीमित रहिआएको भनी विकासनिर्माणका क्रममा विवाद आएको थियो । भारतको रामेश्वरम र श्रीलंका जोड्नका लागि सामुद्रिक रुट निर्माण क्रममा चुलिएको राजनीतिक विवादको समयमा भारतीय पुरात्तात्विक सर्भेले रामसीतामा कथित सीतालाई अपहरणमुक्त गर्न श्रीलंका जोड्नका लागि बनाइएको भनिएको पुलको ऐतिहासिक प्रमाण नभेटिएको बताएको थियो । ठोस प्रमाण नभेटिँदा पनि रामसीता कहानीको यति सराहना किन हुने गर्दछ त ? के राम साँच्चै भगवान् नै हुन् त ?
वाल्मिकीद्वारा लिखित रामायणलाई भारतमा बसोबास गर्ने बंगाली समुदायले सो किताबलाई धार्मिक ग्रन्थका रुपमा नलिई साहित्यका रुपमा अध्ययन गर्ने गर्दछन् । यही रामायणका पात्र राम बुद्धिस्ट जाकता (नं ४६१) को दशरथ जाकतामा पनि प्रकट भएका छन् । सो किताबमा दशरथ रामका पिता छन् तर राम र सीता दाजुबहिनीका रुपमा प्रस्तुत गरिएका छन् । दशरथले उनीहरुलाई देशनिकाला गरेको नभएर सौतेनी आमाको दुष्टताबाट जोगाउन उनीहरुलाई हिमालय क्षेत्रमा वनवास पठाइएको भनिएको छ । यसमा लंका र रावणकोबारेमा भने केही पनि उल्लेख गरिएको छैन । वनवास सकिएपछि उनीहरु अयोध्या नफर्की बनारस फर्किएको भनी यसमा लेखिएको छ ।
माइकल मधुसुदन दत्तले लेखेका मेघनाद वाध काव्य पनि वाल्मिकीद्वारा लिखित रामायणमा आधारित छ । सन् १८६१ म लेखिएको सो शास्त्रीय कवितामा रावणका छोरा र शिवभक्त मेघनादको बहादुरीको बारेमा लेखिएको छ । यही कवितामा रावणलाई जिम्मेवार राजा र सद्गुण पात्रका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ भने लक्ष्मणलाई धोकेवाज र अन्यायी पात्रको रुपमा चित्रण गरिएको छ ।
१५ औंँ शताब्दीमा वाल्मिकीकै कृति रामायणलाई बंगाली भाषामा कृत्तिवशी रामायण वा श्री राम पञ्चाली भनी कृत्तिवश ओझाले कथित गरेका थिए । कोलकत्ताको एसिएटिक सोसाईटी पुस्तकालयमा छैँटौँ शताब्दीको रामायणको पाण्डुलिपी भेटिएको थियो । भारतमा विभिन्न भाषामा रामायणका थुप्रै अनुवाद तथा संस्करणहरु रहेका छन् । तमिलमा रामायणलाई छुट्टै तरिकाले कथित गरिएको छ । यति मात्र होइन, बौद्ध धर्मावलम्बी, शिख र जैनको पनि रामायणको आफ्नै छुट्टै रचना छन् । रामायणकै कथाको कम्बोडियाली, इन्डोनेसियाली, थाइ, बर्मेली, फिलिपेनी र मलेसियालीको छुट्टाछुट्टै अनुवाद तथा संस्करणहरु रहेका छन् ।
थाइहरुको रामायणको संस्करण इन्डोनेसियालीकाभन्दा फरक छन् र वाल्मिकीको कथाभन्दा फरक छन् । कुनैमा रावण सत्पात्रका रुपमा प्रस्तुत भएका छन्, न कि राम । कुनैमा सीता रामकी बहिनी मानिएका छन् । लाओसको रामायणको संस्करणमा लक्ष्मणलाई मुख्य पात्र र रामलाई सहयोगी पात्रका रुपमा देखाइएको छ । ५ औं इशापूर्वदेखि पहिलो इशापूर्वमा वाल्मिकीद्वारा रचित रामायणमा २४ हजार हरफहरु छन् । रामको कहानी भन्ने यो पहिलो कृति नहोला तर यसैलाई मौलिक रामायण मानिन्छ । यसलाई भारतीय साहित्यको मात्र नभई विश्व साहित्यकै महाकाव्यहरुमध्येको मानिन्छ ।
समय बित्दै जाँदा पौराणिक काव्यले वास्तविक रुप लिन थाल्यो । रामायण र महाभारतलाई इतिहास मानिन थाल्यो । यी कथाहरु प्राचीन समयमै भएकै घटनाहरु हुन् र यसले जीवन जीउने दर्शन सिकाउने बताउन थालियो । १७ लाख वर्षअघि त्रेता युगमा घटेको रामायणलाई पुष्टि गरेर राखिएको इतिहासभन्दा पनि धर्म र भक्तिभावको प्रतिकका रुपमा लिन थालियो । तर, यस्ता थुप्रै मानिसहरु छन् जो रामायण प्राचिन समयमा भएकै घटना हो तर यसको पुष्टि गर्ने आधार केही नरहेको भनेर मान्ने गर्दछन् । उनीहरु वाल्मिकीले रामायण कल्पनाको आधारमा लेखेको नभएर, इतिहासलाई कवितामा उतारेका हुन् भन्ने विश्वास गर्दछन् ।
तर, रामलाई काल्पनिक पात्रबाट भगवानको रुप र ऐतिहासिक पात्रको परिचय प्रदान गर्न भने तुलसीदासको रामचरितमानसले सहयोग ग¥यो । रामचरितमानस १६ औँ शताब्दीमा भक्तकवि गोस्वामी तुलसीदासले अवधि भाषामा लेखेका महाकाव्य हो । तुलसीदास संस्कृतका विद्वान् थिए र त्यो समयमा संस्कृतलाई कुलीन वा धनीमानीको भाषा मान्ने गरिन्थ्यो । तर उनलाई रामको कथा अरु भाषामा लेखेर साधारण मानिसमाझ पु¥याउन मन थियो । जसरी विलियम सेक्सपियर कुलीनहरुले प्रयोग गर्ने भाषा ल्याटिनमा नलेखी अंग्रेजीमा लेखेर साधारण मानिससम्म पुगे । त्यसरी नै तुलसीदासले रामको कथासँगै वेद, उपनिषद र पुराणका ज्ञानहरु अवधिमा लेखे ।
अवधि भाषामा लेखिएपछि रामचरितमानस भारतको उत्तरी भागमा तुरुन्तै लोकप्रिय बन्यो । रामकथा र रामलीलाका रुपमा मानिसहरुको संस्कृति र संस्कार बन्न सफल भयो । हिन्दू र हिन्दूस्तानी संस्कृति तथा संस्कारमा राम सत्पात्र, भगवान र ऐतिहासिक पुरुषका रुपमा लाखौँ मानिसको मानसपटलमा बसे । यसरी तुलसीदासले वाल्मिकीको कृतिलाई भक्तिभावपूर्ण रुपमा पुनःलेखन गरेपछि नै रामकहानी चर्चित बनेको हो ।
यस्तोमा वाल्मिकीको रामायण पनि अपभ्रंश हुँदै गयो । उदाहरणका लागि रामायणको खलपात्रका रुपमा चिनिने रावणलाई वाल्मिकीले दश टाउकोको अवतार दिँदा उनलाई चार वेद र छ शास्त्रको ज्ञाताको रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए । तर, पछि रावणको दश टाउकोले मानिसभित्रका दश अहम्लाई बुझाउने भनेर प्रस्तुत भयो । वाल्मिकीले रावणलाई राक्षसका रुपमा नभएर उनमा भएको अहम्ले खलपात्रको रुपमा मात्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
वाल्मिकीको रामायणका अन्तिम भागहरु भने तुलसीदासले विस्तृतमा लेखेका छैनन् । उनले रामचरितमानसलाई सकारात्मक भाव दिने उद्देश्यले पछिल्ला भागहरु जानेरै हटाएका छन् । हामीले सुन्दै आएको रामायणमा बुझ्न पर्ने कुरा के छ भने तुलसीदासद्वारा लिखित रामायण उनले राममा समर्पित भएर लेखेको भक्ति कविता हो । उनको यही भक्तिभावपूर्ण कविता नै आज लाखौँ मानिसको मानसपटलमा रहिआएको छ र आधुनिक समाजमा यिनै रामको नाममा भारतमा मात्र नभई नेपालमा पनि सामुदायिक, सामाजिक, राजनीतिक खिचातानी हुने गरेका छन्, अझ भनौँ नेपालमा बढ्दो छ ।